Nkwadebe maka oyi | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Atiya Nkwadebe maka oyi
Ntụziaka maka ime ka Manchurian jam
Ọ bụrụ na ịchọrọ iju ndị ikwu gị na ndị ọbịa nwere jam nke nwere uto pụrụ iche ma nwee ọtụtụ ihe bara uru, mgbe ahụ Manchurian jam dị mma maka oge gị. Naanị onye ọ bụla nụtụla ụdị nri ahụ, ọ bụ ezie na ọ nwere ọtụtụ ọgwụ na ọgwụ dị iche iche, nke na-eme ka ọ bụghị nanị ihe eji eri nri ụtọ, kamakwa ụdị ọgwụgwọ.
Otu esi echekwa ọka maka oyi: kefriza
Ọka bụ nri dị mma nke ma ndị okenye ma ụmụaka, ma oge ejizi ngwaahịa a eme ihe dị mkpụmkpụ - ọ dị mwute ikwu na ndị na-eto eto enweghị ike ịkwado ruo ogologo oge. Ma ị nwere ike ịgbatị oge ịṅụ ọka ruo oge ọzọ na-esote, ma ọ bụrụ na ị maara otú ị ga-esi ghaa ọka maka oyi na ọka na cob.
Nri nri maka oyi
Ajuju ajuju maka ulo umunwanyi kwa ubochi - ihe esi esi nri maka nri ehihie ma obu nri nri. Na enweghi oge, a na-agbakwunye ụfọdụ njirisi, n'ihi na ọ dị mkpa ka e sie nri ahụ ngwa ngwa, mana n'otu oge ahụ, ọ tọrọ ụtọ, na-enye afọ ojuju ma dị mma. Achọpụta ihe dị iche iche bụ preparations dịgasị iche iche, bụ nke ị ga - esi ngwa ngwa sie nri ọma maka ezinụlọ dum.
Nri zucchini maka oyi n'oge obibi
Ihe na-egbuke egbuke bụ otu n'ime ụzọ kachasị mma nke owuwe ihe ubi maka oyi, nke na - enye gị ohere ichekwa uru ha bara uru ruo ogologo oge dum nke vitamin erughi. Tụkwasị na nke ahụ, site na iji ya mee ihe, ọ ga-ekwe omume ịchekwa ohere dị na kọlọtọ, na-etinye obere nchebe n'ebe ahụ. Ozokwa, ị ga-echekwa oge, mgbalị na ego, n'ihi na usoro dị ngwa ma dị mfe, n'oge okpomọkụ, akwụkwọ nri na-eri ihe na-erughị n'oge oyi.
Otu esi akpo osisi eggplant
Blue - maka ọtụtụ ndị, nke a bụ otu n'ime akwụkwọ nri a hụrụ n'anya n'oge okpomọkụ. Nkwado anaghị eche banyere oge okpomọkụ na-enweghị Saute si eggplants na ndị ọzọ na-atọ ụtọ efere. N'oge na-adịghị anya, mmiri na-agba ọsọ, a na-echekwara eggplants ogologo oge! Ma ị nwere ike ịnwa ịkwadebe ihe oriri a magburu onwe ya maka ọdịnihu ma rie efere nke acha anụnụ anụnụ n'oge oyi.
Idebe, ihicha, kefriza na ụzọ ndị ọzọ nke owuwe ihe ubi na-atọ ụtọ maka oyi
Oge okpomọkụ bụ oge magburu onwe ya: enwere nnukwu mkpụrụ osisi na tomato na ubi na na shelves. Nye ọtụtụ ndị, June bụ ọnwa kachasị amasị ha, nke a bụ n'ihi na n'oge a, owuwe ihe ubi cherị na-eto na osisi. O yikwara ka ị nwere oge zuru ezu iri nri na hel, ma otu ihe ahụ, na mmalite nke ihu igwe oyi, ị na-echeta eriri a na-atọ ụtọ na nhụjuanya.
Ọ bụrụ na-amasị gị plums, ma ị na-esighị esi compote ha, mgbe ahụ, isiokwu a bụ maka gị! N'ime ya, anyị ga-eso gị dị isii dị mfe, mana n'otu oge ahụ, ezigbo ntụziaka na-enye ezigbo ntụziaka nke plum compotes. Na mgbakwunye, anyị ga-akụziri gị ụzọ dị iche iche nke ịkwadebe ihe ọṅụṅụ a. Ma echefukwala ịgwa gị banyere uru ya. Kedu ihe bara uru plum compote Njirimara bara uru nke zuru ezu ọ bụghị nanị maka mkpụrụ osisi, kamakwa maka compote, brewed ha.
Esi mee ka apple cider mmanya na-aga n'ụlọ
Apple cider mmanya bụ na ndepụta nke ngwaahịa ndị nwere ihe bara uru. Ndị mmadụ bịara mara banyere ha n'oge ochie. Na dọkịta dọropathic nke America D. Jarvis kọwapụtara ha n'ụzọ zuru ezu na akwụkwọ bụ Honey and Other Natural Products, nke pụtara na ọ bụ na 1981. N'okpuru ọrụ ya, ọ chịkọtara ntụziaka dị irè maka iji apple cider mmanya na-agwọ ọrịa, na-arụ ụka na iji ya enyere aka igbochi na ịgwọ ọtụtụ ọrịa.
Compote si apricots
Aprịkọt bụ otu n'ime ihe ndị kachasị mma, mkpụrụ osisi ndị kachasị mma ma dị ụtọ ma nwee àgwà nke nkwadebe maka oyi. Na mgbakwunye na jam, jam na jam, ihe ndị dị mma na-akwado ya, isi ihe ndị anyị ga-atụle ugbu a. Kedu uru bara uru nke apricots Apricot nwere otutu ihe bara uru na vitamin.
Ntụziaka maka nkwadebe nke ogwu jam (na-enweghị nkume) na uru ya
Ọtụtụ kweere na ogwu na drenches dị iche aha maka otu berry. N'eziokwu, ihe niile dị njọ. Osisi ya bụ osisi ọhịa ọhịa, ogwu ndị ahụ bụ obere ego nke ugbo ụlọ. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, onye na-edozi ya bụ ihe ndị sitere n'okike nke ogwu na ahịhịa na-emepụta ihe, nke mesịrị mechaa buru ibu ma dị ụtọ karia ogwu, ma ntakịrị obere osisi.
Ezi ntụziaka nke eggplant maka oyi
Nature na-enye anyị nri dị mma ma dị ụtọ. Ya mere, na njedebe nke eggplants n'oge okpomọkụ ma ọ bụ "ndị na-acha anụnụ anụnụ" na-esi na chara akwa, dị ka ndị nkịtị na-akpọ ha. Ọ bụ ezie na ihe oriri a na-acha odo odo na agba karịa acha anụnụ anụnụ na agba, ụdị ụfọdụ dị ọcha. Ihe oriri a bara ezigbo uru ma na-edozi ahụ, ya mere ndị nnabata nwanyị na-anwa ịkwadebe ya maka oyi, mgbe ahụ ka ha nwee ike ime onwe ha na ezinụlọ ha ihe dị ụtọ.
Esi esi esi nri jam maka oyi
Mgbụsị akwụkwọ bụ oge dị mkpa nke afọ maka nwunye ọ bụla, n'ihi na oge eruola iji dozie nchebe maka oyi. Obere ma jiri ya tụnyere tii ọkụ na jam na mgbede oyi oyi. Plum - oke nhọrọ, n'ihi na jam sitere na ya dị ụtọ nke ukwuu, na nri abụghị ihe siri ike. Banyere uru nke plum Plum (lat.
Esi eji osisi plums maka oyi: 3 Ezi ntụziaka
Picklings plums bụ ihe na-adọrọ mmasị, delicious billet. Oseose ụtọ na utoojoo piom mkpụrụ osisi mgbe niile na-achọta ha Fans. Ugbu a, e nwere ọtụtụ ntụziaka maka nkwadebe nke nchekwa dị otú ahụ. Tụlee ụfọdụ n'ime ha. Chọpụta uru ndị inyom nwere ike ime. Kedu plum dị mma ịhọrọ N'ihi pickling kacha mma ịhọrọ ụdị plums dị iche iche "Hungarian", "Renklod" ma ọ bụ ụdị ọ bụla ọzọ na anụ ahụ dị oke.
Esi mee ka sea buckthorn compote: nzọụkwụ site na nzọụkwụ uzommeputa na foto
Oké osimiri buckthorn bụ otu n'ime osisi ndị kasị baa uru na-eto eto na Europe na Asia. N'otu oge ahụ, a ghaghị ikwu uru ndị a na-atụghị anya ya na mkpụrụ osisi dị elu: n'ime afọ dị mma, ruo na 15 kilogram nke mkpụrụ nwere ike isi na otu osisi, ma ọ bụ karịa! O doro anya na ị na-eri ọtụtụ tomato, n'agbanyeghị otú ha si dị ụtọ, bụ nsogbu dị ukwuu.
Otu esi echekwa oka n'ulo
Na ụlọ ahịa ndị na-ere ahịa na-ere ọka ndị na-eri na mkpọ. A na-azụta ya mgbe niile, ebe ọ bụ ihe na-edozi n'ọtụtụ salads na efere ndị ọzọ. Ma ohere dị otú a nwere ike ịme onwe gị n'ụlọ ma ị nwere ike esi nri ọ bụghị nanị mkpụrụ ọka, kama ọ bụ dum cobs. Ntak ọka ọka a na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-adịghị mma ka ọ ghara ịhapụ àgwà ya na nri ndị a na-eri na ya n'ihi ụfọdụ ihe onwunwe: ọ dị calorie ole na ole (58 kcal kwa 100 gram) ma ga-aba uru na nri nke ndị chọrọ ịkwụsị ibu ha; nwere vitamin nke otu B, ascorbic acid, vitamin A na beta-carotene, niacin; nwere macro - na microelements - sodium, potassium, phosphorus, calcium, magnesium, selenium, manganese, ọla kọpa, ígwè na zinc; ihe ndị dị na kernel ọka nwere ụdị antioxidant na oncoprotective; nwere amino acids, tinyere ihe dị mkpa; anaghị akpata flatulence, n'adịghị ka esi esi ya; na ya fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe ọ bụla na-adịghị ahụ; enweghị gluten.
Ntụziaka 10 kachasị elu maka arụrụ ụlọ cherry tincture
Nri tincture bụ ihe ọṅụṅụ dabeere na berry tinyere mmanya na-aba n'anya. Enwere otutu ntụziaka maka cherry tinctures, ma taa, anyị ga-elele n'elu 10, na-egosi na ọnụ ọgụgụ nke ihe oriri na ntụziaka na-eduzi nzọụkwụ. Gịnị bụ tincture bara uru na cherry Ojiji nke tincture na cherry ka kpebiri site na ya mejupụtara.
Autoclave maka nhazi nri
A na-eji ogologo oge eme njem na ọtụtụ ebe: ọgwụ, cosmetology, na ọrụ dị iche iche, ma ihe ka ọtụtụ n'ime ha maara ngwaọrụ iji chebe ụlọ. N'iburu ụdị ngwaahịa ndị a na-esi na ya, ọ bụghị ihe ijuanya. Ọtụtụ ndị nwere mmasị n'ịzụ ma ọ bụ na-eke usoro yiri nke a maka iji ụlọ, ya mere, taa, anyị ga-atụle uru na adịghị mma nke nhọrọ a zụrụ na nke ụlọ.
Ot'u esi eme adjika tomato na akwukwo maka oyi: usoro ihe nzo nke uzo esi eme nri n'ulo
Adjika bụ ihe na-ewu ewu. Ọ na-enwe ike ịme anụ anụ ọ bụla, na-agbakwunye ya ihe pụrụ iche, nke mere na ọ ga-eju ya anya na ihe ọhụrụ na-atọ ụtọ. Ọ kacha mma itinye aka na nkwadebe nke oge a n'oge okpomọkụ, mgbe akwụkwọ nri jupụtara na anwụ na mmiri. Maka nkwadebe ya anaghị achọ mgbalị dị ukwuu, na uzommeputa maka delicious adzhika anyị ga-enye gị n'isiokwu a.
Mkpụrụ fig: nri nri na foto site na nzọụkwụ
Mkpụrụ vaịn, osisi fig, fig bụ ndị yiri mkpụrụ osisi fig ndị a ma ama. Ọtụtụ mgbe, a pụrụ ịchọta fig na shelf na ụdị mịrị. A na-echekwa mkpụrụ vaịn ọhụrụ maka obere oge, ya mere, na mgbakwunye na ihicha, e nwere ụzọ ọzọ iji dozie ọgwụ maka oyi - iji chekwaa. Mkpụrụ fig bụ ihe tọrọ ụtọ tọrọ ụtọ, ụtọ, ahụike, reminiscent nke marmalade ma ọ bụ marmalade na agbanwe agbanwe.
Ogwu osere maka oyi: esi nri dika uzommeputa
N'ebe anyị nọ, isi ihe oriri na nri nri ma ọ bụ okpokoro nri bụ kabeeji, ma ọ bụ na-egbu mmiri. Ọ zuru oke maka ọtụtụ efere dị ka nri n'akụkụ, ọ pụkwara ịbụ nnukwu nri. O siri ike ikwu ụdị osisi, pickled ma ọ bụ pickled, na-atọ ụtọ ka mma. Onye ọ bụla n'ime ya ụtọ.